family life, Author at Myanmar Family Life » Page 1475 of 1505
ခင်ပွန်းရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ထိုင်ချပြီး ငိုခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
Categories: Celebrity, Gossip
နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ဝန် သူမရဲ့သားလေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေကြသူတွေအတွက် သူမရဲ့ instagram ကတဆင့် အမေးအဖြေလေး လုပ်ပေးခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်တွေဆီက မေးခွန်းတော်တော်များများ မေးထားကြတာတွေ့နေပြီး ယွန်းဝတီလွင်မိုးကိုယ်တိုင် မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ်ဖြေထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မေးခွန်းတွေထဲမှာ သူမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို စသိတဲ့အချိန် သူမရဲ့ reaction ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးကို မေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခေးကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိ မရှိ result ကို သူမကြည့်ဖို့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တာမို့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းက ကြည့်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဖြေထားပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိတာသေချာတယ်ဆိုတဲ့အချိန် သူမရဲ့ခင်ပွန်း သူမကိုပြောတဲ့ ပထမဆုံးစကားလေးကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“Baby whatever decision you make, I will support you all the way. We can haveafamily” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူမကိုယ်တိုင်လည်း ဒီစကားကိုကြားပြီး ထိုင်ချပြီး ငိုခဲ့မိတယ်ဆိုပြီး ဖြန်ဖြေထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း ထုတ်ပြဖို့ပြောထားကြတာ တွေ့ရပြီး ကလေးမွေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းပုံတွေကိုလည်း မေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
နာမညျကွီး အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ယှနျးဝတီလှငျမိုးကတော့ သူမရဲ့ ကိုယျဝနျ သူမရဲ့သားလေးနဲ့ပတျသတျပွီး စိတျဝငျစားနကွေသူတှအေတှကျ သူမရဲ့ instagram ကတဆငျ့ အမေးအဖွလေေး လုပျပေးခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
ပရိသတျတှဆေီက မေးခှနျးတျောတျောမြားမြား မေးထားကွတာတှနေ့ပွေီး ယှနျးဝတီလှငျမိုးကိုယျတိုငျ မေးခှနျးတဈခုခငျြးစီကို အသေးစိတျဖွထေားတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။
မေးခှနျးတှထေဲမှာ သူမရဲ့ ကိုယျဝနျကို စသိတဲ့အခြိနျ သူမရဲ့ reaction ကဘယျလိုဖွဈခဲ့သလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေးကို မေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
ဒီမေးခှနျးနဲ့ ပတျသတျပွီး ခေးကတော့ သူမရဲ့ ကိုယျဝနျရှိ မရှိ result ကို သူမကွညျ့ဖို့ အရမျးစိတျလှုပျရှားခဲ့တာမို့ သူမရဲ့ ခငျပှနျးက ကွညျ့ပေးခဲ့တယျလို့ ဖွထေားပါတယျ။
ကိုယျဝနျရှိတာသခြောတယျဆိုတဲ့အခြိနျ သူမရဲ့ခငျပှနျး သူမကိုပွောတဲ့ ပထမဆုံးစကားလေးကိုလညျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
“Baby whatever decision you make, I will support you all the way. We can haveafamily” ဆိုပွီး ပွောပွခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
သူမကိုယျတိုငျလညျး ဒီစကားကိုကွားပွီး ထိုငျခပြွီး ငိုခဲ့မိတယျဆိုပွီး ဖွနျဖွထေားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ပရိသတျတှကေတော့ သူမရဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျဓာတျပုံလေးတှကေိုလညျး ထုတျပွဖို့ပွောထားကွတာ တှရေ့ပွီး ကလေးမှေးပွီး ခန်ဓာကိုယျထိနျးသိမျးပုံတှကေိုလညျး မေးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ။
Fan တွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆယ်လီများ
အနုပညာရှင်နဲ့ အားပေး သူ ပရိသတ်ဆိုတဲ့ စည်းကို ကျော်လွန်ပြီး ချစ်သွားတဲ့ သူတွေလည်း အ များကြီးရှိပါတယ်။ဆယ်လီတစ်ယောက်နဲ့ သူ့ fan ကြားမှာ အချစ်တစ်ခု ပေါက်ဖွား၊relationship တစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့ကြသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ တွေကတော့….
1.S.E.S’s Shoo & Im Hyo Sung
ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား Im Hyo Sung က S.E.S ရဲ့ အမာခံပရိသတ်ပါ။ Shoo ရဲ့ fan တစ်ယောက်ပါ။သူမဟာ သူဘ၀မှာ ပထမဆုံး crush မိတဲ့ ဆယ်လီပါ။သူအရမ်းကြိတ် ကြွေ ရတဲ့ ဆယ်လီကိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ဇနီးအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
2.Cha Seung Won & Lee Soo Jin
Cha Seung Won တစ်ယောက်စတားမဖြစ်ခင် သူအထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကလပ်တစ်ခုကို သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Lee Soo Jin နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့လက်ထပ်ကြတုန်းကLee Soo Jin က (၂၄)၊သူကေ တာ့ အသက်(၂၀)ပဲရှိပါသေးတယ်။
3.Seo Taeji & Lee Ji Ah
Seo Taeji နဲ့ Lee Ji Ah တို့က LA မှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲကိုလာအားပေးရင်းနဲ့ ဆုံခဲ့ကြတာပါ။နှစ် အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ အဆိုတော် Seo Taeji တစ်ယောက် အမေရိကသို့ ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာပဲ နှစ်ယောက်သား လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့အချစ်က မခိုင်မြဲပဲ (၁၀)နှစ် ကြာ မှာတော့ ကွာရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုတော် သားငယ်ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူ
4.Lee Sun Kyun & Jeon Hye Jin
Lee Sun Kyun ဟာနာမည်မကြီးခင်တုန်းက မင်းသမီး Jeon Hye Jin ရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယော က်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ Sun Kyun ရဲ့ သူငယ်ချင်းက သူမရဲ့ ပြဇာတ်မှာ ပါဝင် ဖို့ ဖြစ် လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခွင့်အရေးက သူ့ရဲ့ Idol နဲ့ ဖူးစာဆုံဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ သူမရဲ့ နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
5.Park Hae Il & Seo Yoo Seon
6.Chae Rim & Lee Seung Hwan
ကိုရီးယားမင်းသမီးချောလေး Chae Rim ဟာအဆိုတော် Lee Seung Hwan ရဲ့ fan ပါ။ (၂၀၀၃)မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အချစ်သက်တမ်းကတော့ မရှည် လိုက်ပဲ (၂၀၀၆)မှာ လမ်းခွဲပြတ်စဲခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ ကွာရှင်းပြီးနောက် (၂၀၁၄) မှာတော့ Chae Rim ဟာ တရုတ်မင်းသား Jiame Gao နဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။
7.Hwang Jung Min & Kim Mi Hye
Hwang Jung Min နဲ့ Kim Mi Hye ရဲ့ fan ပါ။သူတို့ဟာ အထက်တန်းတည်းက သိခဲ့ တာပါ။ကျောင်းပြီးတော့ နှစ်ယောက်လုံး ဂီတနယ်ပယ်ကို ၀င်ခဲ့ပါတယ်။လက်ဆောင်တွေနဲ့ ချဉ်းကပ်ပြီး သူမရဲ့ အချစ်တွေကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ Hwang Jung Min တစ်ယောက်နာ မည်ကြီးမင်းသားဖြစ်လာခဲ့သလို Kim Mi Hye ကလည်းနာမည်ကြီး ဂီတာပရိုဂျူဆာတစ်ေ ယာက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
8.Lee Se Joon & Kang Kyung Jin
Kang Kyung Jin ဟာ သူမရဲ့ Idol တွေဆီကို fan club nickname နဲ့ လက်ဆောင်တွေ ပို့တက်သူလေးပါ။နာမည်မဖော်ပဲ လက်ဆောင်တွေ ပို့လာခဲ့ပြီး တစ်နေ့မှာတော့ Lee Se Joon ရဲ့ ပွဲမှာ သူမက ဘယ်သူဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံး အဲ့ဒီတည်းက တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်သဘောကျခဲ့ပေမယ့် ခဏကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျ မှ ပြန်ဆုံဖြစ်ပြီး ချစ်မိသွားခဲ့ကြတာပါ။
9.Juri Ueno & Sho Wada
ဂျပန်မင်းသမီး Juri Ueno ဟာ Trikeratop Band ကို (၁၇)နှစ်လောက်အားပေးလာတဲ့ အမာခံ fan ပါ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အဲ့ဒီ Band ရဲ့ အဆိုတော် Sho Wada နဲ့ ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာရှင်နဲ့ ပရိသတ်အဆင့်ကို ကျော်ပြီးသူတို့ကြားမှာ အချစ်တွေ ပေါက်ဖွားခဲ့ကြပါတယ်။
10.Wesley Snipes & Nikki Park (Park Na Kyung)
Nikki Park တစ်ယောက် New York မှာ စာသင်ဖို့သွားတော့ အမေရိကန်မင်းသား Wesley Snipes ကို နှစ်သက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။သူကြိုက်တဲ့ မင်းသားနဲ့ အပြင်မှာ ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ပြီးလို့ ကလေး(၄)ယောက်ရနေပါပြီ။
သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို (ခေါ်) Banana ရဲ့ သီချင်း MTV ထွက်ရှိမည်။
မြန်မာအိုင်ဒေါကနေ သီချင်းစာသားမေ့လို့ ဦးသိန်းတန်ရဲ့ ငှက်ပျောသီးကျွေးခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ အနုပညာကို ရူးသွပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို တစ်ယောက် အခုဆိုရင် အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိလို့ လာပါတော့မည်…
မကြာသေးခင်ကလည်း ဒါရိုက်တာ လေပြေ ရိုက်ကူးတဲ့ သရဲချစ်သူ ဇာတ်ကားမှာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိပြီး ဖြစ်ပါတယ်..။
အခုလည်း တေးရေး ကျော်မင်းဟန် ရေးစပ်ပေးထားတဲ့ မမရေလွမ်းလို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ MTV ရိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်…
တေးဆို – ခြိမ့်ကေကို သီဆိုထားပြီး သူကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင် အဖြစ်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြိတ်မြို့မှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ တွေ့ရပြန်ပါတယ်..
“ဒီ #မမရေလွမ်းလို့ ဆိုတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ပထမဆုံး music MTV လေးကို ကျနော်ရဲ့ ဆရာ ကိုကျော်မင်းဟန်က ရေးစပ်ပေးထားပါတယ် ဒီ music mtv လေးကို မြိတ်မြို့က ကိုကြီး AungThanHtike ကစီစဉ်ပြီး မြိတ်မြို့ မှာ သွားရောက်ရိုက်ကူး ပါမယ် ကျနော် အကောင်းဆုံးကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဗျာ မကြာမှီ ကျနော် ပရိတ်သတ်ရှေ့ကို ချပြပေးသွားပါမယ်”
source – Chaik Kay Ko
မွနျမာအိုငျဒေါကနေ သီခငျြးစာသားမလေို့ ဦးသိနျးတနျရဲ့ ငှကျပြောသီးကြှေးခွငျးကို ခံလိုကျရပွီး အှနျလိုငျးပျေါမှာ နာမညျကွီးသှားတဲ့ အနုပညာကို ရူးသှပျသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခွိမျ့ကကေို တဈယောကျ အခုဆိုရငျ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါသို့ ရောကျရှိလို့ လာပါတော့မညျ…
မကွာသေးခငျကလညျး ဒါရိုကျတာ လပွေေ ရိုကျကူးတဲ့ သရဲခဈြသူ ဇာတျကားမှာလညျး ပါဝငျ သရုပျဆောငျထားတယျဆိုတာ ပရိသတျတှေ သိပွီး ဖွဈပါတယျ..။
အခုလညျး တေးရေး ကြျောမငျးဟနျ ရေးစပျပေးထားတဲ့ မမရလှေမျးလို့ ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးနဲ့ MTV ရိုကျတော့မှာဖွဈပါတယျ…
တေးဆို – ခွိမျ့ကကေို သီဆိုထားပွီး သူကိုယျတိုငျ သရုပျဆောငျ အဖွဈပါဝငျ သရုပျဆောငျမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ မွိတျမွို့မှာ သှားရောကျရိုကျကူးမညျဖွဈကွောငျး တငျပွထားတာကိုလညျးတှေ့ တှရေ့ပွနျပါတယျ..
“ဒီ #မမရလှေမျးလို့ ဆိုတဲ့ ကနြျောရဲ့ ပထမဆုံး music MTV လေးကို ကနြျောရဲ့ ဆရာ ကိုကြျောမငျးဟနျက ရေးစပျပေးထားပါတယျ ဒီ music mtv လေးကို မွိတျမွို့က ကိုကွီး AungThanHtike ကစီစဉျပွီး မွိတျမွို့ မှာ သှားရောကျရိုကျကူး ပါမယျ ကနြျော အကောငျးဆုံးကွိုးစားသရုပျဆောငျထားပါတယျဗြာ မကွာမှီ ကနြျော ပရိတျသတျရှကေို့ ခပြွပေးသှားပါမယျ”
ပန်ထွာဧကရီ ခေါ် ယောက်ျားတွေကိုမုန်းတဲ့ဘုရင်မ
တကယ်တော့ မြန်မာ့ရာဇ၀င်ထဲမှာ အမျိုးသားတွေပဲ ရာနှုန်းပြည့် နေရာယူထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးချွန်ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထဲကမှ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ အစောပိုင်းကာလ ဖြစ်တဲ့ ပျုခေတ်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဗိဿနိုးဘုရင်မ ပန်ထွာဧကရီ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးပဒေသရာဇ် ခေါင်းဆောင် အကြောင်းကို ကျနော်သိသလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်..။
သရေခေတ္တရာပြည်တွင် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး အုပ်စိုးနေစဉ်ကာလအတွင်း ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်အဖြစ် ဗိဿနိုးပြည်တွင် ပန်ထွာဘုရင်မက အုပ်ချုပ်နေခဲ့သည်။ ( ရာဇ၀င်ကျမ်းများအရ “ပြည်” ဟုသုံးနှုန်းရသော်လည်း အမှန်မှာ မြို့ပြနိုင်ငံ ( city-state) အဆင့်မျှသာဖြစ်ပါသည်။)ပန်ထွာဘုရင်မသည် လူသာမန်မဟုတ်ချေ။ ခမည်းတော်မှာ တကောင်းမင်းကြီး၏သားတော်အရင်း မဟာသမ္ဘ၀ ဖြစ်ပြီး မယ်တော်မှာ စန္ဒမုခိဘီလူးမ ဖြစ်သည်။ ( တကောင်းမင်းကြီးက မျက်မမြင်သမ္ဘ၀ညီနောင်ကို ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်းမျှောလိုက်ရာ လမ်းခရီး၌ စန္ဒမုခိဘီလူးမက ထမင်းခိုးစားသည့်အခါ သမ္ဘ၀ညီနောင်က ရိပ်မိပြီး သတ်မည်ဟု ဘီလူးမလက်ကို ဆွဲသည်တွင် ဘီလူးမက မဟာသမ္ဘ၀ကို တပ်မက်စိတ်ဖြင့် သာယာမိသည့်အတွက် ပဋိသန္ဓေ ခသည်ဟုဆို၏။ အံ့ဖွယ်ပင်။)စန္ဒမုခိဘီလူးမသည် သမီးလေးကို မွေးပြီးသည့်အခါ ပျူရွာတစ်ရွာအနီးရှိ ဆရာရသေ့ထံ ပညာသင်စေခဲ့သည်။ မိပန်ထွာလေး၏ ထက်မြက်မှုကို အနီးအပါးရှိ ရွာများကပါ သိရှိလာပြီးနောက် အရွယ်ရောက်သည့်အခါ သူမကိုသာ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း တင်မြောက်ခဲ့ကြသည်။ပန်ထွာသည် ထိုရွာအပေါင်းတို့ကို စုစည်းကာ ဗိဿနိုးမြို့ပြနိုင်ငံအဖြစ် ကျုံး၊မြို့ရိုးတို့ဖြင့် အကွက်ချကာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
( ပန်ထွာဘုရင်မမှာ အတိတ်ဘ၀က ဗိဿနိုးနတ်မင်း၏ နှမ တော်စပ်ခဲ့သဖြင့် ဗိဿနိုးနတ်မင်း၏ ချီးမြှောက်မှုဖြင့် မြို့တည်ခဲ့ရာမှ ဗိဿနိုးမြို့ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ မြို့အတွင်းတွင် ဗိဿနိုးနတ်မင်းကို နတ်နန်းဖြင့် အကြီးအကျယ် ပူဇော်ကြသည်။ နတ်နန်း အနီးရှိ အင်ကြင်းပင်တို့မှာ ယနေ့အချိန်ထိ ဆယ့်နှစ်ရာသီမရွေးဖူးပွင့်ကြသည် ဟုဆိုသည်။ ဘုရင်မသည် မြို့အနီးရှိ ရန်ပယ် ချောင်းရေကို စနစ်တကျ အသုံးချကာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် စီမံခဲ့သည်။စီမံပုံမှာ- ရန်ပယ်ချောင်း အထက်တွင် ရေတားတံခါး အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်စေပြီး ဗိဿနိုးမှ စည်တီးကာ အချက်ပြသည်နှင့် ရေတံခါးများကို ဖွင့်ချစေကာ မြို့ပတ်လည်ကို ရေလွှမ်းမိုးစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ( တံခါးများကို တစ်ဆက်တည်း ဖွင့်ချခြင်းမဟုတ်ဘဲ တစ်ချပ်ပြီးမှ တစ်ချပ် အချိန်ယူကာ ဖွင့်စေခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကြောက်မက်ဖွယ် ရေစီးအားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။)
ထိုသို့ ဗိဿနိုးတွင် ဧကရီအဖြစ် တစ်ထီးတစ်နန်းရပ်တည်နေစဉ် သရေခေတ္တရာပြည်မှ ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးသည် ပန်ထွာဘုရင်မနှင့်တကွ မြို့ကိုပါ သိမ်းပိုက်လိုသဖြင့် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ချီတက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။သို့ရာတွင် မြို့တံခါးကို အလုံပိတ်ထားသော ဗိဿနိုးမှ စည်တီးသံကျယ်ကျယ် တစ်ချက်သာ ကြားလိုက်ရပြီး ခဏအကြာတွင် နတ်ဆိုးအော်သံကဲ့သို့ အသံပေးကာ တစ်ဟုန်ထိုးဝင်လာသည့် ရေလုံးကြီးအောက်တွင် သရေခေတ္တရာစစ်သည်တို့ ဖရိုဖရဲဖြစ်ကုန်ကြသည်။ရေမျောသူမျော ကမ်းတင်သူတင် ဖြစ်နေစဉ် ဗိဿနိုးဘက်မှ လေးသည်တော်များက ပေါ်လာသမျှသော မည်းမည်းမြင်ရာတို့ကို မြားဖြင့် ပစ်သဖြင့် သရေခေတ္တရာရဲမက်များ အထိအရှများခဲ့ရသည်။ ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးလည်း အံကိုကြိတ်ကာ နောက်ပြန်ဆုတ်ရတော့သည်။သို့သော် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးသည် ရန်ပယ်ချောင်းရေတံခါးများသည် စည်သံအပေါ်ရပ်တည်နေကြောင်း သိသည့်အခါ ထိုစည်ကို ဖျက်ဆီးရန် သူလျှိုတစ်ဦးကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ထိုသူလျှိုသည် ရသေ့အဖြစ် ဗိဿနိုးပြည်သို့ ၀င်ရောက်ပြီး ပန်ထွာဧကရီ၏ ဆရာရသေ့ထံ ဆည်းကပ်ကာ ယုံကြည်မှု ရယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။သုံးလေးလခန့် ကြာသည့်အခါ သူလျှိုရသေ့က သူ့တပည့်များကို ဗိဿနိုးမြို့တွင်းမှ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျွဲ၊ နွားများကို ခိုးယူစေပြီး သင့်ရာနေရာတွင် ဝှက်ထားစေသည်။ ပစ္စည်းပျောက်သူက သူလျှိုရသေ့ကိုမေးသည့်အခါမှ ရှိရာနေရာကို အတပ်ဟောပြီး ပစ္စည်းပြန်ရစေသည်။ ထိုအခါ သူလျှိုရသေ့ကို ယုံကြည် ဆည်းကပ်သူများ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ဆရာရသေ့ရော ပန်ထွာဘုရင်မပါ ထိုသူလျှိုကို ယုံကြည်လာပြီးသည့်အခါ ၄င်းက ဗိဿနိုးကာကွယ်ရေးအတွက်ထားသော စည်တော်ကြီးကို ယခုထက်ပိုမိုအကျိုးထူးအောင် လောကီအစီအရင်များဖြင့် သိဒ္ဓိတင်ပေးလိုကြောင်း တောင်းဆိုလာခဲ့သည်။ပန်ထွာဧကရီလည်း ယုံကြည်ကာ စည်တော်ကြီးကို သူလျှိုရသေ့ထံ စိတ်ချလက်ချ အပ်နှင်းလိုက်သည်။နောက်နေ့မနက်တွင်မူ နန်းတော်ဦးရှိ စည်တော်ကြီးကို အပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်ဖြင့် တုန်လှုပ်ဖွယ် တွေ့ကြရပြီး သူလျှိုရသေ့မှာလည်း ခြေရာပျောက် ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။
(ထို့ကြောင့် ပန်ထွာဘုရင်မ မှာ ရသေ့ရဟန်း အတုအယောင်များကို မုန်းတီးပြီး သူမပိုင်နက်မဟာမြိုင်တောအတွင်း၌ ရောက်လာသမျှ ရသေ့ရဟန်းဟူသမျှ၏ သီလသမာဓိကို အစမ်းအသပ်ကြမ်းသည်ဟု နာမည်ကြီးလေသည်။ပန်ထွာဧကရီ အသည်းဆတ်ဆတ်တုန် ဒေါသထွက်နေစဉ် မှာပင် မြို့ရိုးတံခါးများပိတ်သံကို ကြားရကာ မြို့ရိုးပြင်ဘက်မှ ဆင်သံ မြင်းသံများကိုပါ ကြားလိုက်ရသည်။ ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး လာရောက်တိုက်ခိုက်ပေပြီ။
စည်တီး၍ အသံမထွက်။ အသံမထွက်သည့်အခါ ရေမကျ။ ရေမကျသည့်အခါ အင်အားကြီးမားသော ရန်သူ၏ပြင်းထန်သော တိုက်စစ်ကို ဗိဿနိုးသားတို့ အလူးအလဲ ခံကြရသည်။ မခံနိုင်သည့်အဆုံးတွင် ဗိဿနိုးနန်းဦးသို့ ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး၏ ဆင်တော်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဗိဿနိုးသားတို့၏သွေးစက်များ အလောင်းများ ပြန့်ကျဲနေသည်ကို ကြည့်ကာ ပန်ထွာဧကရီ အံကြိတ်ထားမိသည်။
-” သရေခေတ္တရာပြည်ဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပါတယ် အစ်မတော်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ စံမြန်းစေလိုတဲ့စေတနာ၊ ကျွန်ုပ်ရဲ့မေတ္တာ တွေကြောင့် ပင်ပန်းကြီးစွာ စစ်ချီခဲ့ရပါတယ်။”
ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး၏စကားတို့ကို ပန်ထွာဧကရီ မည်သို့မျှ မတုံ့ပြန်ခဲ့ပေ။ မိမိက စစ်ရှုံးသူမဟုတ်လား။ စစ်ရှုံးသူပီပီ သူပြုသမျှ နုရပေတော့မည်လေ။ဤသို့ဖြင့် သရေခေတ္တရာပြည်သို့ ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး၏ မိဖုရားအဖြစ် ပန်ထွာရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးသည် ပန်ထွာဧကရီကို လွန်စွာမြတ်နိုးတော်မူသည် ဆို၏။
သို့သော် သားတော်တစ်ပါးရသည့်တိုင် ပန်ထွာဘုရင်မ၏ အမုန်းက မပြေနိုင်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးကို လုပ်ကြံရန် အတွင်းလူများဖြင့် တိတ်တဆိတ် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အတွင်းလူများက မင်းကြီးသည် ဘုန်းကြီးလွန်းသဖြင့် တိုက်ရိုက်လုပ်ကြံရန် မလွယ်ကြောင်း၊ ဘုန်းနိမ့်စေရန် စီစဉ်ပြီးမှ လုပ်ကြံစေလိုကြောင်း လျှောက်ကြသည်။
ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးသည် ပန်ထွာဧကရီဆက်သသော မျက်နှာသုတ်ပ၀ါကို အသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် နဖူးမှ မှဲ့ရှင်တော် ကွယ်ပျောက်ခြင်း၊ လှံများ ဓါးများ အရောင်မထွက်တော့ခြင်း တို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မင်းကြီး ဘုန်းနိမ့်သွားချေပြီ။
တုန်လှုပ်သွားသော မင်းကြီးသည် ပန်ထွာဧကရီကို နားမလည်ဟန်ဖြင့် ကြည့်နေစဉ်မှာပင် ပန်ထွာဧကရီက မဲ့ပြုံးတစ်ချက် ပြုံးပြလိုက်သည်။ မင်းကြီးသည် သူမ၏လက်ချက်မှန်း သိသည်နှင့် သူမဆက်သည့် ဖျော်ရည်ကိုလည်း မသောက်တော့ဘဲ အရင် မြည်းစမ်းပြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ပန်ထွာဧကရီသည် လက်ထဲမှ ဖျော်ရည်ခွက် ကို မြှောက်ကာ အောက်ပါကျိန်စာကို ရွတ်ဆိုခဲ့သည်။
-” ကျွန်ုပ်သည် မိမိ၏ ဗိဿနိုးပြည်ကို တရားသဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်နေသူဖြစ်ပါသည်။ ဤသရေခေတ္တရာ ဒွတ္တပေါင်မင်းက နိုင့်ထက်စီးနင်း ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဘ၀တွင် သူ့အား သတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် နောက်ဘ၀များတွင်သာ လက်စားချေရန် ကြိုးပမ်းပါတော့မည်။ ဒွတ္တပေါင်မင်းကို ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့် လက်စားမချေရသေးမခြင်း သရေခေတ္တရာပြည်အနီးရှိ ပေပင်ငယ် တို့သည် ယခုအရွယ်မှ ဆက်လက်ကြီးထွားခြင်း မရှိဘဲ ရပ်တန့်နေပါစေ”
(မူကွဲတွင် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးသည် ဘုန်းကံနိမ့်ပါးသွားသော်လဲ ပန်ထွာမိဖုရားအား ချစ်မြတ်နိုးလှသဖြင့် အပြစ်မယူသည်ကို မင်းကြီး၏ မောင်းမမိဖုရားများက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ အဆိပ်ခတ်ထားသော ၀က်မြေစာဥကို ပန်ထွာမိဖုရားအား ဆက်သကြရာမှ မိဖုရား အဆိပ်မိကာ နတ်ရွာစံသည်။ သေအံ့ဆဲ အချိန်တွင်မှ ကျိန်စာစကားဆိုခဲ့သည် ဟု ဆိုကြသည်။)
ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးလည်း ဘုန်းကံနိမ့်ပါးရသည့်အပြင် ချစ်စွာသော မိဖုရား၏အမုန်းကျိန်စာကိုပါ ကြားရသည်တွင် များစွာ ကြေကွဲတော်မူသည်။ပန်ထွာဧကရီသည် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးကို လက်စားချေရန် အခွင့်ရသေးဟန်မတူချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သရေခေတ္တရာမြို့အနီးမှ ပေပင်ငယ်တို့သည် ယနေ့ထက်တိုင် အပင်ငယ်များ အဖြစ်မှ ဆက်လက်ကြီးထွားခြင်းမရှိဘဲ ရပ်တည်လျက်ရှိသေးသည် ဆို၏။ အမုန်းကျိန်စာကား အံ့ဖွယ်ပင်။ရာဇ၀င်ထဲက ပန်ထွာဘုရင်မကို သတိရမိလို့ ဒီပို့စ်ကို စာစီပါတယ်။ သိပြီးသား အကြောင်းအရာဆိုရင်လည်း အခုလို အချိန်ပေးဖတ်ရှုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သရခေတ်ေတရာပွညျတှငျ ဒှတ်တပေါငျမငျးကွီး အုပျစိုးနစေဉျကာလအတှငျး ထီးပွိုငျနနျးပွိုငျအဖွဈ ဗိဿနိုးပွညျတှငျ ပနျထှာဘုရငျမက အုပျခြုပျနခေဲ့သညျ။ ( ရာဇဝငျကမျြးမြားအရ “ပွညျ” ဟုသုံးနှုနျးရသျောလညျး အမှနျမှာ မွို့ပွနိုငျငံ ( city-state) အဆငျ့မြှသာဖွဈပါသညျ။)ပနျထှာဘုရငျမသညျ လူသာမနျမဟုတျခြေ။ ခမညျးတျောမှာ တကောငျးမငျးကွီး၏သားတျောအရငျး မဟာသမ်ဘ၀ ဖွဈပွီး မယျတျောမှာ စန်ဒမုခိဘီလူးမ ဖွဈသညျ။ ( တကောငျးမငျးကွီးက မကျြမမွငျသမ်ဘဝညီနောငျကို ဧရာဝတီမွဈအတိုငျးမြှောလိုကျရာ လမျးခရီး၌ စန်ဒမုခိဘီလူးမက ထမငျးခိုးစားသညျ့အခါ သမ်ဘဝညီနောငျက ရိပျမိပွီး သတျမညျဟု ဘီလူးမလကျကို ဆှဲသညျတှငျ ဘီလူးမက မဟာသမ်ဘဝကို တပျမကျစိတျဖွငျ့ သာယာမိသညျ့အတှကျ ပဋိသန်ဓေ ခသညျဟုဆို၏။ အံ့ဖှယျပငျ။)စန်ဒမုခိဘီလူးမသညျ သမီးလေးကို မှေးပွီးသညျ့အခါ ပြူရှာတဈရှာအနီးရှိ ဆရာရသထေံ့ ပညာသငျစခေဲ့သညျ။ မိပနျထှာလေး၏ ထကျမွကျမှုကို အနီးအပါးရှိ ရှာမြားကပါ သိရှိလာပွီးနောကျ အရှယျရောကျသညျ့အခါ သူမကိုသာ ခေါငျးဆောငျအဖွဈ တဈညီတဈညှတျတညျး တငျမွောကျခဲ့ကွသညျ။ပနျထှာသညျ ထိုရှာအပေါငျးတို့ကို စုစညျးကာ ဗိဿနိုးမွို့ပွနိုငျငံအဖွဈ ကြုံး၊မွို့ရိုးတို့ဖွငျ့ အကှကျခကြာ ဖှဲ့စညျးတညျထောငျခဲ့သညျ။
( ပနျထှာဘုရငျမမှာ အတိတျဘဝက ဗိဿနိုးနတျမငျး၏ နှမ တျောစပျခဲ့သဖွငျ့ ဗိဿနိုးနတျမငျး၏ ခြီးမွှောကျမှုဖွငျ့ မွို့တညျခဲ့ရာမှ ဗိဿနိုးမွို့ဟု ချေါတှငျခဲ့သညျ။ မွို့အတှငျးတှငျ ဗိဿနိုးနတျမငျးကို နတျနနျးဖွငျ့ အကွီးအကယျြ ပူဇျောကွသညျ။ နတျနနျး အနီးရှိ အငျကွငျးပငျတို့မှာ ယနအေ့ခြိနျထိ ဆယျ့နှဈရာသီမရှေးဖူးပှငျ့ကွသညျ ဟုဆိုသညျ။ ဘုရငျမသညျ မွို့အနီးရှိ ရနျပယျ ခြောငျးရကေို စနဈတကြ အသုံးခကြာ နိုငျငံတျောကာကှယျရေးအတှကျ စီမံခဲ့သညျ။စီမံပုံမှာ- ရနျပယျခြောငျး အထကျတှငျ ရတေားတံခါး အဆငျ့ဆငျ့တညျဆောကျစပွေီး ဗိဿနိုးမှ စညျတီးကာ အခကျြပွသညျနှငျ့ ရတေံခါးမြားကို ဖှငျ့ခစြကော မွို့ပတျလညျကို ရလှေမျးမိုးစခွေငျး ဖွဈသညျ။ ( တံခါးမြားကို တဈဆကျတညျး ဖှငျ့ခခြွငျးမဟုတျဘဲ တဈခပျြပွီးမှ တဈခပျြ အခြိနျယူကာ ဖှငျ့စခွေငျးဖွဈသဖွငျ့ ကွောကျမကျဖှယျ ရစေီးအားကို ဖွဈပျေါစသေညျ။)
ထိုသို့ ဗိဿနိုးတှငျ ဧကရီအဖွဈ တဈထီးတဈနနျးရပျတညျနစေဉျ သရခေတ်ေတရာပွညျမှ ဒှတ်တပေါငျမငျးကွီးသညျ ပနျထှာဘုရငျမနှငျ့တကှ မွို့ကိုပါ သိမျးပိုကျလိုသဖွငျ့ အငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ ခြီတကျတိုကျခိုကျလာခဲ့သညျ။သို့ရာတှငျ မွို့တံခါးကို အလုံပိတျထားသော ဗိဿနိုးမှ စညျတီးသံကယျြကယျြ တဈခကျြသာ ကွားလိုကျရပွီး ခဏအကွာတှငျ နတျဆိုးအျောသံကဲ့သို့ အသံပေးကာ တဈဟုနျထိုးဝငျလာသညျ့ ရလေုံးကွီးအောကျတှငျ သရခေတ်ေတရာစဈသညျတို့ ဖရိုဖရဲဖွဈကုနျကွသညျ။ရမြေောသူမြော ကမျးတငျသူတငျ ဖွဈနစေဉျ ဗိဿနိုးဘကျမှ လေးသညျတျောမြားက ပျေါလာသမြှသော မညျးမညျးမွငျရာတို့ကို မွားဖွငျ့ ပဈသဖွငျ့ သရခေတ်ေတရာရဲမကျမြား အထိအရှမြားခဲ့ရသညျ။ ဒှတ်တပေါငျမငျးကွီးလညျး အံကိုကွိတျကာ နောကျပွနျဆုတျရတော့သညျ။သို့သျော ဒှတ်တပေါငျမငျးကွီးသညျ ရနျပယျခြောငျးရတေံခါးမြားသညျ စညျသံအပျေါရပျတညျနကွေောငျး သိသညျ့အခါ ထိုစညျကို ဖကျြဆီးရနျ သူလြှိုတဈဦးကို စလှေတျခဲ့သညျ။
Page 1,475 of 1,505